Ihe na - eche echiche - Nzube ndi mmadu
Ihe na-emetụ n'ahụ
Egwu egbu egbu pụtara
A maara nnụnụ dị ka ndị nwere onwe n'efu bụ ndị mere ọtụtụ ndị ji na-egwupụta ya. Ọ nwere ike jikọta ya na ọtụtụ ihe na ndụ ma nke a bụ ihe mere ị ga - eji chọta ndị nwoke na ndị inyom na - eji ya eme ihe. Ụfọdụ ndị mmadụ na - ejikọta egbugbu na oke, nnwere onwe, udo, ịhụnanya, ihe ọmụma, ọgụgụ isi, ịdị mma, mma, ezinụlọ, nne, nduzi ime mmụọ na ọtụtụ nza.
A na-eme ka a na-eme ka a na-egbu nri dị iche iche ka ọ bụrụ ihe dị mma ma dị iche iche. Nke a bụ otu n'ime ihe mere ndị mmadụ ji ahọrọ ya maka ụdị egbugbu ndị ọzọ. E nwere ụdị aghụghọ dị iche iche nke nnụnụ na-enwe ihe dị iche. Ọ bụ gị ga-ekpebi ụdị nnụnụ ị chọrọ iji banye n'ime ahụ gị. Nnụnụ na-abịa nha na ụdị na onye nke ọ bụla nwere ihe pụrụ iche banyere ha. Ndị nwere mmasị ịga maka nnwere onwe ma ọ bụ echiche nke ịbụ ndị na-adị ndụ nwere ike ịga maka akara ngosi a pụrụ iche. A na-etinye ọnya nnụnụ na akụkụ ọ bụla nke ahụ na-enweghị ya na ọ pụtara na ọ furu efu nakwa na ọ nwere ike ịkọ ọtụtụ ihe banyere mmadụ.
Pịa ebe a maka ịlele echiche ntanetị nke nnụnụ ọhụụ ọhụrụ maka ndị ikom na ndị inyom.
Mandala tattoo pụtara
Mandala tattoo nwere ọtụtụ ihe ọ pụtara ma nwee ike ịpụta dumness. Ekara na egbugbu na-ekwu banyere izu okè na nguzozi na ruo mgbe ebighi ebi, mgbe ị na-ele anya n'ebe niile site na etiti ruo niile isi. Ọtụtụ okpukpe na-eji ya agwa ọtụtụ ndị na-ekwesị ntụkwasị obi ọtụtụ ihe.
Okpukpe Hindu - dị ka Hindu si kwuo, mandala nwere ike ịpụta ntụgharị uche. Nke a bụ n'ihi na eji ya dị ka ihe na-elekwasị anya ma ghọọ ngwá ọrụ gbasara ime mmụọ.
Christianity - Iso Ụzọ Kraịst na-ewere mandala gaa n'ọzọ ọzọ n'ihi na ọ nwere ike igosi na akụkụ dị iche iche nke ụka dịka windo ndị na-egosi ọrụ dị mkpa nakwa na a pụkwara iji ya mee ihe dị ka ụdị nkà.
Buddha - Mandala nwekwara ihe jikọrọ ya na ndị Buddha, ha na-eji ya na ememe okpukpe na ntụgharị uche ha. A na-eji ya dị ka ihe nrịba ama nke ndụ.
Mandala tattoo aghọwo ihe ọtụtụ ndị na-eji na-anọchite anya ọtụtụ ihe na ndụ, dị ka ahụ dị n'eluigwe. A pụrụ iji egbu egbu mee ọtụtụ okwu na ị nwere ike ịmata ma ọ bụrụ na ị hụrụ ezigbo egbu egbu na-achọ ihe.
Pịa ebe a maka ịlele ntinye mkpado ejiji mkpado maka nwoke na nwanyi.
Egbu egbugbu pụtara
Ogbugbu nduru aghọọla ihe nnọchianya nke ịhụnanya, udo na nsọpụrụ. Ọ bụ ihe dị nsọ nye Onye Kraịst ma bụrụ onye a ma ama kemgbe ọtụtụ afọ. Ogbugbu nduru ahụ abịawo nọrọ na anyị n'ihi ịdị mma ya. Ọtụtụ ndị mmadụ na-anakwere ịma mma nke na-egbu egbu a. E nwere ọtụtụ ihe ndị metụtara nduru ahụ. Ọ na-anọchi anya ọmụmụ, nwanyị na ịma mma.
Ndị Juu kwenyere na ọ na-anọchite anya okwukwe na ha na-eji ya n'ịgbasa echiche na nkwenye ha. Echiche nke Ndị Kraịst na-agbanye mkpọrọgwụ n'ime ya. Ndị na-eji ya eme ihe kwenyere na ha bụ ndị dị nro na ndị na-ahụ n'anya.
Uche igbu egbuo nwere oke ihe dị mkpa n'ụwa. A na-eji ya egbu egbu maka ndidi. Ọ na-anọchite anya nkwụsi ike na ịdịgide. A na-egbu egbugbu nke nduru ka ọ bụrụ ihe mara mma. Nwa nduru ahụ na-acha ọcha dị ọcha. Ka a sịkwa ihe mere ụfọdụ ụmụ agbọghọ na-aga maka ya na mbụ ha na-achọ ka ha bụrụ ihe àmà nke ịdị ọcha na nlekọta. Ndị mmadụ nwere ike itinye ihe oyiyi ndị ọzọ dị ka nduru ahụ gụnyere iji ozi mee ihe iji kọwaa ụdị igbu egbugbu nke echiche nduru.
Pịa ebe a iji chọpụta echiche mkpocha ọhụrụ nduru maka ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị.
Ogbugbu egbu ogbugbu
Ogbugbu egbu egbu aghọwo otu ụdị ịkọ ihe n'ihi ihe ọ na-anọchite anya ya. Ọtụtụ mmadụ ndị ink na-ekwenye na ọ na-emetụta ikike ndị dị n'eluigwe nakwa na mbara igwe, ọ na-egosi akụkọ ihe mere eme na sayensị. Ndị na-eji egbu a egbu egbu nwere ike ghara inwe mmasị n'ihe ndị ahụ dị n'elu n'ihi na egbugbu ọnwa nwere ọtụtụ ihe ọ pụtara. Ọnụ ọgụgụ nke ihe ndị ọnwa nwere pụtara bụ ihe na-eme ka ọ bụrụ ihe pụrụ iche. Enwere ike ichikota ya na ihe ozo ndi ozo iji nye gi ihe di nma. Ụfọdụ n'ime ihe ndị ọnwa pụtara pụtara. Ndị kweere na anwansi nwere ike iji onk na-egbu egbu n'akụkụ ọ bụla ha. Ọnọdụ igwe nke ọnwa bụ ihe na-eme ka ndị mmadu dee ya n'ahụ ha ma ha bụ ndị kwuru na ọ na-anọchi anya njedebe na ụkọ.
Ọnwa nwekwara ike inwe ihe ọ pụtara nye nwanyị mystique. Ọnwa nwere ike ịpụta creativity na ndị na-achọ ọmụmụ, ọ bụ ngwá ọrụ zuru oke. Ọnwa na-anọchite anya ọganihu, ihe ọjọọ, ncheta nke ndị ị hụrụ n'anya, ụkọ, nkwenkwe Wiccan, nkwanye ike na-adịghị mma na akụkụ ndị gbara ọchịchịrị. A pụrụ ichota egbugbu ụwa site na ihe ndị ọzọ iji nye ya ihe pụrụ iche.
Pịa ebe a maka ịlele ọnwa ọhụrụ ọnwa echiche maka ndị ikom na ndị inyom.
Ụdị igbu egbugbere ọnụ
Uche nke egbu egbu octopus bụ ihe ijuanya nke mere na ndị mmadụ nwere ya n'akụkụ dị iche iche nke ahụ ha. Ọnwụ ahụ dị mgbagwoju anya, nke a bụkwa otú o si anọchite anya ihe dị iche iche. Onwe ma ọ bụ ihe mgbagwoju anya nke octopus bụ ihe na - agbakwunye àgwà nke octopus. Akụkọ ifo oge ochie na-ekwu na 8 dị ka ọnụ ọgụgụ dị ịrịba ama n'ọtụtụ akụkụ nke ndụ. Nke a bụ ihe e kere eke nwere ụkwụ asatọ dị ka ihe dị ike. Ọnụ octopọs dabara n'ime ụdị ndị a. Ụdị egbugbere ọnụ octopus sitere n'aka ike nke aka na-eto azụ. Ọnwụ ahụ nwere ike ịpụta nchịkọta na nlọghachi.
Ọtụtụ ndị na-eji ya eme ihe iji kwere na a ga-ehichapụ ha. Ogbugbu egbugbere ọnụ na-egosikwa na e nwere olileanya n'ọdịnihu. Ikike nke octopus ime ọtụtụ ihe na ọtụtụ aka ya bụ ihe mere ndị mmadụ ji kwere na ihe e kere eke bụ multitask. Ọ na-egosi na egbu egbu nke octopus bụ maka ndị ọ dị mkpa ka a mụọ ha ọzọ. Ọnwụ ahụ pụtara anwansi, ihe magburu onwe ya na ụkọ. Uche nke octopus bụkwa ihe na - eme ka ọ pụta ìhè na ìgwè mmadụ ahụ n'ihi ike ya ịmepụta nkwado.
Pịa ebe a iji chọpụta echiche ejiji tattoo ejiji ọhụrụ maka ndị ikom na ndị inyom.
Tiger Tattoo pụtara
Ogbugbu Tiger bụ otu n'ime ndị kasị ewu ewu karịsịa n'etiti ndị Asians. Ihe agigide pụtara na-eme ka ọ pụta ìhè. Ọnwụ nke agu bụ ihe na-egosi ụzọ mmadụ si ebi n'enweghị ihe ọ bụla. Ha na-anọchite anya ike, ike, na ike. Enwere ike ịsị na ha nwere ike ịba ụda n'ihi na ekwenyere na ikike nke eluigwe na-achịkwa ha.
Ndị na-aga maka igbu egbu tiger adịghị achịkwa agụụ n'ihi na ha kwenyere n'echiche. Ndị inye egwu a na-egbu egbu iji gosipụta ike ha nwere ike ịbụ. E kweere na agịga bụ ndị nchebe nke ndị nwụrụ anwụ. Nke a bụ ihe mere ha na-ahụkarị na ili ma ọ bụ ili.
A pụrụ ịhụ ọnyá tiger n'akụkụ dị iche iche nke ụwa na ha na-anọchi anya ọtụtụ ihe. Mgbanwe nke tattoos ndị a bụ ihe na-eme ka ha bụrụ ihe pụrụ iche. Ha na - anọchi anya ike, Ike, Dominance, Royalty na Nobility, Danger na Mbibi, Ike, Nchedo na Nchebe, Passion na Mmekọahụ. Nke a bụ ihe mere ọtụtụ ndị ji eji ya. Ihe mara mma nke egbugbere anya nke agu bu ihe mere ya ndi nwoke na ndi nwanyi.
Pịa ebe a iji chọpụta echiche nyocha nke tiger nke ọhụrụ maka ndị ikom na ndị inyom.
Njirimara ịchọta Dreamcatcher pụtara
Egbu egbu egbu na-ewu ewu maka ndị si America. Eche egbu egbu na-anọchite anya ọdịbendị ọdịbendị nke ndị mmadụ. Achịcha nrọ ahụ na-enyere aka n'iwepụ ike na-adịghị mma. Ndị na-achọ ịtụ ụjọ nrọ ma ọ bụ nrọ na-ezighị ezi na-eji egbu egbu nrọ. Ndị na-egbu egbu onk na-enwe ike ihi ụra n'udo na ọṅụ. Ọ bụrụ na ị na-eme atụmatụ ịchọta ụdị egbuchapụ pụrụ iche nke ga-agwa ọtụtụ akụkọ site na nchịkọta ya na ndụ nwere ike iji akara egbu egbu.
Mgbe a na-etinye feathers na igbu egbu egbu, ọ na-eje ozi dịka isi iyi ntụrụndụ karịsịa maka ụmụaka. Mkpụrụ nke na-anọchite anya ikuku na ume dị ezigbo mkpa maka ndụ. O nwere ike inye aka n'igbu nrọ ọjọọ site na ụmụaka. Mgbe a na-etinye feathers dị iche iche na nrọ nrọ, mmetụta nke egbu egbu gbanwere. Mgbe agbakwunyere ikwiikwii ikwiikwii, ọ na-anọchite anya amamihe na mgbe a na-agbakwunye ugo nke ugo, ọ na-egosipụta obi ike. Onye ududo na onye nrọ ahụ pụkwara ikwu banyere creativity nke egbu egbu. Nrọ nrọ nwere ike ịpụta ọtụtụ ihe dabere na ihe agbakwunyere na ọ bụ gị ga-ekpebi ihe ị ga-eji.
Pịa ebe a iji chọpụta echiche nchịkọta nchịkwa ọhụrụ nke nrọ maka ndị ikom na ndị inyom.
Utu akara ugo
Ihe Uche Tattoo bụ ihe ị ga-achọ ịma. E nwere ọtụtụ ihe na-egbu egbu. Ugo bụ nnụnụ a na-egbukepụ n'ụwa niile ma tinyekwa àgwà ọma na ya. O nwere ike ịpụta ike, ohere, amamihe, nnwere onwe, ike na oke, ike, ikike, ohere, ozi nke chi na ọnọdụ ime mmụọ. Ọ pụtara ọtụtụ ihe na ike dị ukwuu. Uche ahụ na-eme ka ọ dị iche iche na mmetụta nke ọchịchị ya. E nwere ọdịiche dị iche nke ugo nke na-abịa na nkọwa ha.
Ugo nke ugo na-ekwu banyere nnwere onwe na nchebe. Ọ bụrụ na ị na-achọ nnwere onwe, otu n'ime ntinye ị nwere ike ịga bụ igbu egbu ugo. Nchedo ọ na-enye bụ ihe mere ọtụtụ ndị ji jiri ya na-elezi anya ọjọọ. A na-esepụta akara ugo n'ụzọ dị otú a ka e si kọwaa ihe ọ pụtara. Nke a bụ ya mere ọ na-ewu ewu ma ọ dịkwa obere. Nnukwu nnụnụ ahụ bụ ihe a na-atụle gburugburu ụwa. Ọ bụrụ na ịchọrọ inwe nnukwu ihe nnọchite anya nke ịdị ukwuu na-etinye n'ahụ gị, akara ugo bụ ihe ga-eme ka nnọchiteanya ahụ.
Pịa ebe a maka ịlele echiche nhazi nke akara ugo ọhụrụ maka umu nwoke na nwanyi.
Etu egbu egbu pụtara
Egbu egbu egbu jupụtara n'ọtụtụ ọdịbendị, dịkwa iche na Ndị Kraịst na omenala ndị Ijipt. Anya ga-enyere gị aka iji gosipụta omniscience, nchebe ma ọ bụ doro anya. Ụfọdụ nwere ike iji ya mee ihe ngosi. N'agbanyeghị ụdị ebumnuche ị nwere, egbu egbu bụ ihe ga-enyere gị aka na nnọchite anya gị. Ọbụna ma ọ bụrụ na ị bụ onye nupụ isi, anya gị kpuchie. Enweghị onye na-anọchite anya egbu egbu ma ọ bụrụ na ị nwere ekele maka ndụ nwanyị, ị gaghị enwe ike igbu egbu egbu.
Anya nke ihe dị iche iche dị iche iche na-anọchi anya ihe dị iche iche. Were egosipụ anya nke horus na ndị ọzọ, nwee mmetụta tattoo nke dị mkpa nye onye na-ekiri ya. Ogbugbu egbu egbu mara mma ma kwuekwa banyere ọdịnihu nke ọdịnihu. Anya aghọwo ihe eji egbu egbu nke na-eme ka ndị mmadụ nwee ekele maka ụdị ndụ ha. Ihe niile a na-ahụ na chi dị iche iche nwere ike ịchọta ya.
Etu egbu egbu nwere ike inwe ekele mgbe a na-aha ya na ihe ndi ozo ma obu ozi ndi i maara ihe o bu. Ọtụtụ ndị si gburugburu ụwa na-eji egbu egbu egbu egbu ka ha pụọ.
Pịa ebe a maka ịlele echiche nyocha anya ọhụrụ anya maka ndị ikom na ndị inyom.
Egbu egbu egbu
Ogbugbu egbu egbu na-ewu ewu ma na-ewu ewu na ọdịbendị dị iche iche nke ụwa. Na omenala, egbu egbu egbu bụ maka ụmụ nwanyị. Mma okooko osisi na-anọchi anya ihe na-adabere na ifuru nke eji. Okooko osisi rose nwere ihe ọ pụtara dị ka okooko osisi ndị ọzọ nwekwara ihe ha pụtara. Ogbugbu a na-egbu egbu Japanese bụ otu n'ime ndị a kasị mara amara ma nwee mmetụta pụtara ìhè na ya. Okooko osisi nwere ike na-anọchi anya anụ ahụ, mmeputakwa, ọmụmụ, nkwado, nrọ, anwansi, ekele, nlekọta na ịhụnanya. Ihe nke ifuru nwere ihe jikọrọ ya na ozi ahụ na ejiji na-achọ inyefe ndị ọzọ.
A pụghị ileghara akara igbu mkpụrụ osisi anya n'ihi akara nke o nwere. Ndị mmadụ na-agbakwunye ya ugbu a site na ịbịpụta ihe ndị ọzọ ma ọ bụ ihe dị na ya iji nye ha ụdị ozi pụrụ iche nke enwere ike ịpụtara maka ha. Osisi ọ bụla si na rose ruo ogige lotus nwere ihe ha pụtara. Ọ bụ gị ga-ekpebi ụdị ozi ị chọrọ ịga. Ụdị akara egbugbu bụ otu n'ime ihe kachasị mma n'ihi ọtụtụ ihe na akara dị iche iche ha na-ekerịta gburugburu ụwa. Mgbe agbakwunyere okooko osisi, agba na ihe, ha na-egosipụta ihe dị ukwuu.
Pịa ebe a iji chọpụta akara ngosi akara mkpịsị aka nke ọhụrụ maka ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị.
Egbu egbu egbu egbu egbu
Ọkpụkpọ geometric pụtara ihe kariri i nwere ike iche. Ọ nwere ihe pụrụ iche nke dịka ihe mgbakwasị ụkwụ. Ihe okwu a na-aga n'ihu bụ nke na-aga n'ihu. Ụdị ahụ nwere ọtụtụ ihe metụtara mgbakọ na mwepụ na ọ bụ mgbe niile egbu egbu nke ọtụtụ ndị na-eji na-anọchite anya nkenke, nguzozi na ịdịgide. Ọ na-ekwukwa banyere ịkọwapụta maka ụzọ e si kee ya.
Egwu egbu egbu nwere ike ịpụta njedebe na oge. Ihe nile banyere ihe geometric na-enye aka n'inwe afọ ojuju na obi ụtọ, nakwa ụzọ e si etinye ya na-eme ka ọ bụrụ otu ụdị egbu egbu. Isi ihe na-eme ka ọtụtụ ndị nwee obi ụtọ nwere ike ịmịpụta egbugbu. Ogbugbu nke Geometric aghọwo uzo ahu nke jiri otutu ihe na-achota ihe ha nwetara na ndu.
Ọ na-egosipụtakwa nghọta nke onye na-ahụ maka ya. Ọ bụrụ na ịchọrọ igosi ụzọ ị ga-esi kwadoro ma kwụ ọtọ na ndụ, ị nwere ike iji akara iku anya nke dị na mpempe akwụkwọ na-egosi na ọ bụ ihe ziri ezi ma dị iche. Ụdị nke a ga-eji na-egbu egbu mmiri nwere ike inye gị ihe dị iche. Ndabere nke igbu egbu geometric bụ ihe na-eme ka ụmụ nwanyị ahụ hụ ya n'anya.
Pịa ebe a maka ịlele atụmatụ nhazi ihuenyo ọhụrụ nke ndị mmadụ maka ndị ikom na ndị inyom.
Ụdị Tattoo Hamsa
Ihe eji egbu egbu Hamsa bu uba ma nwee ihe di iche iche gburugburu uwa. Ọnwụ ahụ na-eji ihe ọmụma na akara nke na-enye ya ụdị obi ụtọ a. Ise nke egbu egbu na-anọchi anya uche mmadu. A na-ekwere na egbu egbu na-egosi obi ike, nchebe, obi ike na obi ike. E nwere ụzọ abụọ e nwere ike isi nọchite anya egbu egbu. Nke mbụ, a pụrụ iji ya mee ihe ọjọọ ma ọ bụ ihe ọjọọ. Ihe na-esote ya bu nke a iji mee ka o nwe obi uto.
A na-ahazi egbugbu Hamsa n'ọtụtụ ụzọ dị ka mgbe ejiri ya na-eme ya, a pụrụ iji ya na-echedo nchedo; anya nke Horus. Ekwenyere na anya a nwere ike na-ele ndị mmadụ anya na ọbụna na-achụpụ ihe ọjọọ. Na Islam, a pụrụ iji egbu egbu Hamsa mee ihe n'ịgwa banyere akara ise islam. Ọ bụ ya mere a na-akpọ ya Fatima. Aka Fatima na-anọchite anya Fatima Zahra. Fatima, ada Muhammad.
N'ọchịchị ndị Juu, ọ na-anọchi anya ekpere ise ha n'ekpere ha nakwa akwụkwọ akwụkwọ 5 Torah. Eji egbugbere ọnụ Hamsa bụ ihe ọtụtụ omenala na-eji eme ihe maka nkwenkwe na nkwenkwe ha. Ọ pụtara ihe karịrị nke ahụ.
Pịa ebe a maka nyochaa echiche mkpocha ọhụrụ nke akacha mma maka umu nwanyi.
Egwu egbu egbu na-apụta
Ọkpụkpọ akpị ahụ pụtara ọtụtụ ndị si n'akụkụ dị iche iche nke ụwa. Ọnwụ ahụ bụ ihe atụ ma na-adabere na ya na omume nke ihe e kere eke. O nwere ike na-anọchite anya nwoke na nwanyị na-enwe obi ụtọ ma na-enwe mmekọahụ n'ihi ụdị ịgba egwú ọ na-eme mgbe a na-eme ya. A na-eji ndị Mayans na-anọchite anya ịwa ahụ na-ejikwa akpụrụ dị iche iche na-eme ihe dị iche iche, na-emekarị ihe ọjọọ. Enwere ike iji ya mee ihe nchedo ma na-anọchi anya onye agha.
Ọtụtụ ndị lanarịrị ọrịa cancer na-eji egbu egbu iji kọọ akụkọ banyere njem cancer ha. A na-ahụkarị ndị na-alụ ọgụ ma ọ bụ ọbụna ndị na-eti ọkpọ na-eji egbu egbu egosipụta ndị ha bụ. Ogbugbu akpiri ahu putara iguzogide na mgba ka ndi mmadu na-ewere ya dika ihe kwesiri ntukwasi obi, onye kwesiri ntukwasi obi. A pụkwara iji egbu egbu na-ekwu banyere agụụ, ike, ọgụ, ntachi obi, nchebe, nnọgidesi ike, nchebe, ọnwụ, iguzosi ike n'ihe na ihe ọjọọ.
Ị kpebie ihe ịchọrọ igbu akpị gị pụtara nye gị. Enwere ụdị aghụghọ egbu egbu dị iche iche nke ị nwere ike ịhọrọ na onye ọ bụla n'ime ha nwere nkọwa ha. Otú ọ dị, ịnwere ike ịmetụ egbugbu gị iji kọwaa ihe dị iche.
Pịa ebe a iji chọpụta echiche nsịcha ọhụrụ nke nchacha maka ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị.
Ụdị isi akara isi
Atụmatụ Tattoos Atụmatụ dịgasị iche site n'otu ebe gaa n'ọzọ. E nwere okpokoro isi dị iche iche, ha nwekwara ihe ha pụtara. Echiche nke na okpokoro isi pụtara ọnwu site na ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ndị mmadụ nwere ike ọ gaghị abụ eziokwu karịsịa ma ọ bụrụ na ejiri anya anya buru ibu. Okpokoro isi nwere ike ịbata na ọtụtụ ụzọ na ha na-ejedebe na ezi ihe ị ga-ahụ n'anya. Ogbugbu okpokoro isi nwere ike ibu ihe ncheta banyere onye nwuru anwu nakwa na anyi nile kwesiri ibi ndu a n'uzo zuru ezu.
Uche nke okpokoro isi nwekwara ihe ha pụtara dị ka egbugbere ọnụ shuga na-eto eto bụ nke a na-akpọkarị mkpịsị ụkwụ sket na Mexico ma ọ bụ egbu egbu osisi. Dịka ọmụmaatụ, ndị Mexico na-ahụ ụbọchị igbu egbu egbu n'ihi ọrụ ọ na-etinye.
Ndị inyom na-eji mkpịsị aka okpokoro a na-eme ya na-acha akwa agba iji nye ya nkọwa. E nwere ndị na-ejikọta okpokoro isi ya na obe ndị na-egbu egbu, ndị egbu egbu nwere ọtụtụ ihe dịka onye ahụ na-ese.
Ndị inyom na-ejikarị agba na-agbanwe ụzọ ndị mmadụ si egbu egbu na nkọwa ya dịkwa oke.
Pịa ebe a iji chọpụta echiche nchịkọta akụrụngwa ọhụrụ maka ndị ikom na ndị inyom.
Sun na ọnwa egbu egbu pụtara
Uche nke Sun na Moon Tattoos bụ ihe ị ga-ama mgbe ị na-aga maka inking. Echiche egbu egbu nke anyanwụ na ọnwa nwere ọtụtụ ụdị na atụmatụ na onye ọ bụla na-eji aghụghọ savvy onye nwere ike iji. Ụdị ọnwa na anyanwụ na-ekwu banyere gburugburu ndụ nke na-adịghị agwụ. Mgbe ọkara ọkara na ọnwa na-etinye n'ime gburugburu, ihe ọ pụtara pụrụ ịdị iche.
Na-ekwu okwu banyere egbu egbu anyanwụ, ọ na-anọchite anya ike, ike na nlọghachi mgbe ọnwa egbu egbu nwere ike ịkọwa akụkụ nwanyị nke ndụ na omenala ụfọdụ mgbe ọ na-abịakwute chi nwanyị. Mgbe anyanwụ na ọnwa na-acha, ihe ọ pụtara dịgasị iche dabere na agba ndị ị họọrọ. Anyanwụ nke na-egosiputa mmadụ akụkụ nke ndụ nwere ike ijikọta ya na ọnwa iji gosipụta ekele dị na Yin Yang. Mmekọahụ nke nwoke na nwoke bụ ihe atụ nke anyanwụ na egbugbu ọnwa.
Anyanwụ na ọnwa igbu egbu nwere ike ikwu okwu banyere ọchịchọ nke dị egwu n'etiti ndị hụrụ ya n'anya. Nke a bụ ihe mere ngwakọta nke ihe abụọ ahụ dị na mbara igwe aghọọla ụdị igbu egbugbu dị egwu nke onye ọ bụla nwere ike iji. Enwere ike ịhazi ụdị igbu egbugbu ọ bụla.
Pịa ebe a maka ilele anya anyanwụ ọhụrụ na ọnwa akara ngosi maka ndị ikom na ndị inyom.
Sun tattoo pụtara
A na-ewu ewu na-ewu ewu mgbe niile n'oge ochie. Ihe omimi nke anyanwu bu ihe na-adiri ma nwoke ma nwanyi. Ihe anyanwụ pụtara pụrụ ịbụ ihe na-adịghị mma ma ọ bụ dị mma ma nke a dabere na omenala si ebe mmadụ si abịa. Ọ bụghị ihe nzuzo na a gaghị egbochi ndụ n'enweghị anyanwụ. Anyanwụ nwere ike ịpụta ndụ, ike, ike, ịhụnanya na nkwado ndụ. Ọ pụkwara ịpụta nlọghachi ọzọ na ụfọdụ okpukpe nwekwara ihe pụrụ iche banyere anyanwụ. E nwere ụzọ dị iche iche na egbu egbu nwere ike ịdọta mmasị na ha nwere ihe ha pụtara. Anyanwụ na-ebili pụrụ ịpụta ike Chineke na ịdị ebube. Ọtụtụ ndị na-eji anyanwụ na-apụta dịka egbugbere ọnụ nke anyanwụ nke ọtụtụ ndị na-akwado egwuregwu na-eji.
Ihe eji egbu egbu bu ihe mere ndi choro igosi ike ha na uche ha na-aga n'ihu. Anyanwụ na-abịa n'ụdị dị iche iche dị ka agba mmanụ oro nwere ihe pụrụ iche. Ụdị nke anyanwụ nwekwara ọtụtụ ihe dịka ọdịbendị nke igbu egbu si abịa. Ha na-egbuke egbuke magburu onwe ha.
Pịa ebe a iji chọpụta echiche ndị ọhụrụ na-eme ka ndị ikom na ndị inyom mara mma.
Mkpụrụ osisi akara
Ogbugbu osisi aghọwo ihe nnọchianya nke ahụmahụ na-adịte aka na ogologo oge. Osisi niile na-anọdụ ruo ogologo oge ma nọrọ ruo afọ 500 n'ụwa, ọgbọ nke mmadụ. Nke a bụ ihe mere e ji tinye osisi iji gosipụta ogologo oge ma gbanwee. Ike nke osisi na ngbanwe ya n'ọnọdụ ọ bụla bụ ihe na-adọrọ ọtụtụ ndị. Onye ọ bụla nwere ike inye egbugbu n'ahụ ha. Osisi ahụ nwere ike inye ụlọ na nchedo ọtụtụ ihe e kere eke. Nchebe nke ọ na-ewetara ndị ọzọ bụ ihe dị ịrịba ama. Ndị na-achọ nchekwa na ndụ ha nwere ike iji ya maka ink ha. Ha bụ osisi dịgasị iche iche dị iche iche na ihe dị mkpa.
Osisi ụfọdụ na-ejikwa osisi ahụ eme ihe n'ihi ihe ọ pụtara. Ọnụ ọgụgụ osisi ndị dịnụ na ihe atụ ahụ ọ na-anọchi anya, onye ọ bụla nwere ike iji ya. Ị nwere ike iji osisi nke dị nso n'ọdịbendị gị na -emepụta nkwupụta okwu siri ike n'ahụ gị. Ọnọdụ ihe atụ nke osisi ahụ nwere ike ime ka ọ pụta ìhè na ịmepụta osisi egbugbu gị n'ahụ gị dabere na ozi ị chọrọ ịgafe.
Pịa ebe a iji chọpụta echiche mkpocha ọhụrụ nke osisi maka ndị ikom na ndị inyom.
Ogbugbu okpueze pụtara
Ogbugbu okpueze bụ ihe pụrụ iche n'ihi na ọ pụtara ikike na ike eze. A na-eji okpueze mee ihe dị ka onye nwere ọtụtụ ihe. Ndị si n'ụlọ ndị eze na-adị mfe ịchọta egbugbu egbugbere ọnụ n'ihi na ọ dị nso n'obi ha. Enweghị ebe n'ụwa na okpueze ahụ enweghị ihe dị mkpa. Ihe nnọchiteanya nke egbugbu egbugbere ọnụ bụ ihe na ọbụna ụmụ nwanyị enweghị ike ịgafe.
A pụrụ iji egbugbu egbugbere ọnụ mee ihe na-anọchi anya onye ndu. Ndị ahụ a hoputara nwere ike ink agbu a iji gwa ha ihe ha ruru. Ọnwụ ahụ bụ kpochapụwo ma nwee ike ịme ndị mmadụ ka ha soro nrọ gị. Ị nwere ike inweta mmụọ nsọ dị gị mkpa mgbe ị na-edepụta akara ndị a n'ahụ gị. Ọ na-ewe banyere ọbụbụeze nke onye na-arịọ ya. Ọ na-achọ banyere njide onwe onye na ikwu okwu banyere emeghe nke onye na-egbu egbu.
E nwere ụdị nha a dị iche iche na ị ga-ekpebi otu ị chọrọ ka okpueze gị dị. Na njedebe nke ụbọchị ahụ, okpueze ahụ na-anọchite anya ihe ka ibu na ihe bara uru na ị nwere ike ịghọta.
Pịa ebe a maka ịlele nyochaa akara ngosi ọhụrụ ọhụrụ maka echiche nwoke na nwanyị.
Ihe eji egbu egbu na Diamond
Akara ejiji diamond bụ akara a maara nke ọma na ejikọtara ya na ịma mma na akụnụba. A na-ahụ tattoos ndị a n'ọtụtụ akụkụ nke ahụ ma jiri ya mee ihe ịchọ mma. A na-eji egbugbere ọnụ diamond mee ihe iji kwurịta banyere enweghị ike imeri. Nke a bụ nkọwa ziri ezi na egbu egbu na-enye n'ihi na enweghi ike ibibi ya.
Ọnwụ ahụ bụ otu n'ime nkume ndị dị oké ọnụ ahịa a na-achọsi ike. Nke a bụ ihe mere ndị mmadụ ji ele ya anya dịka ihe ama nke obi ike na ịma mma. Ọ bụrụ na i nwere echiche nke dị oke ọnụ na ịchọrọ igosi ụwa site na igbu egbu, ị nwere ike iji egbugbere ọnụ diamond. A pụrụ iji egbu egbu ahụ na-anọchite anya nchedo pụọ n'aka ndị ọjọọ ahụ ma na-enyere ndị mmadụ aka imeri egwu ha. Ihe nke a nwere ike ịbụ akara nke njedebe na eluigwe na ala. A na-ejikọta egbugbere ọnụ diamond na ihe ndị nwere mgbagwoju anya ma ọ bụ ike anwansi. Ọtụtụ ndị ụkọchukwu okpukpe na-eji ya eme ihe. Ogbugbu diamond nwere ike ịpụta iguzosi ike n'ihe, ịhụnanya, ìhè n'eziokwu, udo na ọhụhụ
Ọnụ mmiri diamond pụkwara ịpụta eze na okomoko. Ị na-ekpebi ihe egbugbere ọnụ diamond gị pụrụ ịpụta gị mgbe ị na-ahazi ya dịka ntanetị ma ọ bụ ọdịdị gị.
Pịa ebe a iji chọpụta ihe eji emepụta ihe eji emepụta ejiji maka ndị ikom na ndị inyom.
A na-ahazi egbugbu ahụ dị ka ndụ, ọbụbụ ọbụbụ ịhụnanya. Ọnwụ ahụ na-egosipụta obi ma ọ bụ ọbụna kpakpando. Ogbugbu na-ebighi ebi bu ihe i nwere ike iji na-ebughari ozi di ike nke choro ndi mmadu.
Ọ dịghị onye na-eme ya ka ọ dị mma ma a bịa n'ihe banyere igbu egbugbu. Otú e si kee ya na ihe nyocha nke mgbakọ na mwepụ nke ọ na-ekwu maka ya. Ogbugbu a na-ebighi ebi aghọwo ụdị ozi pụrụ iche nke na ụmụ nwoke na-ahụ n'anya na-agwa ndị mmekọ ha mkpebi ha ịdị mma karịa ha. Ogbugbu a na-ebighi ebi na-abata na ụdị na nha. Enwere ike ịgbasa ihe a mgbe ọ gbakwunyere ihe ndị ọzọ iji mee ka ọ dị iche na ihe dị ịtụnanya.
Pịa ebe a maka ịlele ntinye akara ngosi na-enweghị ntụpọ ọhụrụ maka ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị.
Egwu Samurai bụ nanị egbugbu ahụ nke nwere koodu na-adịghị ahụkebe nke a na-akpọ bushido- nke pụtara na ndị dike ụzọ ndụ. Egwu nwere akụkụ asaa dị mkpa na-ekwu maka Samurai. Ọnwụ ahụ na-anọchite anya nkwanye ùgwù, nsọpụrụ, obiọma, iguzosi ike n'ihe, ịkwụwa aka ọtọ na obi. A na-ejikwa egbu egbu na-ekwurịta banyere obi ike, ike na nhazi. Enwere ike igosi ihe ndị dị obere ma dị iche iche dị ka octopus, koi ika na octopus iji kwado maka nchekwa, enyemaka na obi ike.
Okirikiri Samurai emewo ka ọ dị mma maka ndị mmadụ na-anọchite anya ndị na-enweghị atụ na ụjọ. Ha na-egosipụta ike na ike. Ọnwụ ahụ nwere ike ịbụ nwoke ma ndị mmadụ hụrụ ya n'anya iji merie ọgụ na ọnwụ. Ụdị Samurai na-ekwu banyere àgwà onye ahụ na-eyi ya. Ọnwụ ahụ pụkwara ịbụ nwanyị na-ewere ya na ndị inyom. Ihe Samurai nwere ike ịga ogologo oge na-agwa ndị ọzọ akụkọ na ị nweghị ike ikwu.
Ntube nke tattoo Samurai nwekwara ike ịkọ akụkọ dị iche ma ọ bụ ihe ọ pụtara nke nwere ike ịkwado gị na ịgaga elu dị elu dị ka ụfọdụ ihe egbu egbu ndị ọzọ n'ebe ahụ.
Pịa ebe a iji lelee atụmatụ samurai samurai ọhụrụ maka ụmụ nwoke.
Sunflower tattoo pụtara
Ọdịdị sunflower pụtara ọtụtụ ihe. A maara ifuru ahụ maka ọdịdị ya ma bụrụ oge okpomọkụ nke ndị hụrụ anyanwụ n'anya, ihe nnọchianya nke oge okpomọkụ ma ọ bụ ọbụna ụdị mmasị. Ọ bụ ifuru na-arara nye anyanwụ ma ghọọ ihe na-anọchite anya mmepe nke ndụ. Enwere ike eyi ya dị ka okpueze ma ọ na-egosi anyanwụ mgbe niile. Ndị mmadụ na-ewere ya dị ka ihe nnọchianya nke iguzosi ike n'ihe, obi ụtọ, ihe okike, ọkụ na ìhè.
A na-amịpụta tattoo sunflower na ọtụtụ ụdị na nha, ndị a nwekwara ihe ha pụtara. Ị bụ onye nwere ike ime ka anyanwụ gị na-agabiga oge anyanwụ dị mkpa karịa ihe dị ala karịa ndị ọzọ nwere ike iche. Ụfọdụ ndị na-agbakwunye ihe na ọbụna ozi ya nke bụ ihe egbu egbu pụkwara ịpụta. Ọtụtụ omenala nwekwara nkọwa pụrụ iche ha nwere banyere sunflower. Ọnwụ ahụ aghọwo otu n'ime ndị ọkacha mmasị nke ndị chọrọ igosi ọnọdụ ndụ ha n'ụzọ kachasị mma. Enwee ike ịdị ndụ na-egosi na ọ dị n 'ahụ ahụ site n'akụkụ dị iche iche. A na-eji akụkụ ọ bụla nke ahụ mee ihe iji kọwaa ihe anyanwu pụtara.
Pịa ebe a iji chọpụta echiche ndị ọhụrụ na-acha ọkụ ọkụ nke sunflower maka ụmụ nwanyị.
Ọnụ egbu egbu Henna
Ọnụ ọgụgụ Henna pụtara ihe dị ịrịba ama nye ndị na-eburu ya. Ọ bụ ihe ịchọ mma oge ochie na ahụ nwere ọtụtụ ihe ọ pụtara. A na-eji ya na-anọchite anya obi ụtọ, obi ụtọ ma nwee ike na-anọchite anya agha, ọmụmụ, ngọzi na alụmdi na nwunye. A na-eji egbu egbu henna mee ihe iji kwurịta ihe na-emetụbeghị. Iji henna mee ihe bụ ihe ga-enye gị njikọ ime mmụọ ahụ ma nwee mmetụta ndị a dị egwu na-emetụta ya.
Akụkụ nke ọ bụla nke henna na-etinye nwere ihe ọ pụtara na nkọwa pụrụ iche. Enwere ike itinye ya n'ọbụ aka ya iji kwuo banyere ngọzi na mgbe a na-etinye ya n'aka, ọ na-ekwu banyere nchebe na agbanyekwara ọta ahụ.
Ogbugbu Henna bụ otu egbugbu ndị mmadụ na-eji eme ihe dị iche iche n'ihi na onye ahụ na-ahụ ya dị mkpa. E nwere ihe ndị a ga-agbakwunye ha iji mee ka ha kọọrọ ya ihe pụrụ iche ma ọ bụ akụkọ. Henna bụ ike na nhazi ya na ihe ọ pụtara. Ị nwere ike isi na ìgwè mmadụ pụọ mgbe ị na-eji egbu egbu henna iji mee nkwupụta okwu ike ahụ nke ịchọrọ mgbe niile ịkọrọ ụwa ma ị nweghị ike ime nke a.
Pịa ebe a iji chọpụta echiche ọgbara ọhụrụ henna na-eche echiche maka ndị ikom na ndị inyom.
Ọkpụkpọ egbu egbu pụtara
Ihe Ntucha Cat Na-apụta pụtara ọtụtụ ihe. Onye na-ahụ maka ya bụ onye ga-ekpebi ihe ọ ga-eme na igbu egbugbu. Ihe oyiyi ahụ na-egosi ọtụtụ àgwà, nke gụnyere agụmakwụkwọ, ọganihu, ike nwanyi, ihe omimi, ihe omimi na njikọta na nsọpụrụ Chineke, ime mmụọ, ịba ụwa ọzọ, njikọ ndụ, nchebe, nghọta, ọgụgụ isi, ịdị mma, ịdị mma, na ịṅa ntị.
Ịgbazi nwamba nwere echiche nke ịbụ nne, nchebe, ịchụ nta na ọbụna nlekọta na ịbịaru ego. Ị nwere ike ịga maka mkpịsị na-egbu egbu n'ihi na ha pụtara ọgụgụ isi, ịma mma, ịma mma na ịdị mma. Otú ọ dị, e jikọtara ya na arụsị na amoosu na Europe.
A na-eji nwamba ekwu banyere nnwere onwe na ndụ. Ọtụtụ ndị na-eche na ị ga-aga ihe dị iche na nke pụrụ iche pụrụ ịga maka egbu egbu. Ihe a pụtara dị ịrịba ama ma dịkwa oke oke nghọta. A na-agbakwunye ihe ndị ọzọ iji jide n'aka na ha nwere nkọwa dị iche site na ihe ị chere na mbụ. Ihe egbu egbu na-apụta pụtara na ọ bụ ihe kpatara ọtụtụ ụmụ nwanyị na-eji aga. Ihe na-esiri ya ike bụ ihe a na-apụghị ịkọwa akọwa na inweghachi ihe ọ pụtara na ọtụtụ ndị ga-achọ ịbịaru nso na njedebe nke ụbọchị ahụ.
Pịa ebe a iji chọpụta echiche nkwekọrịta ntaneti ọhụrụ maka ndị ikom na ndị inyom.
Ụdị Cross Tutu pụtara
Ogbugbu egbu egbu bu otutu ihe nye otutu ndi mmadu. Nke a nwere ike na-anọchi anya ihe ndị na-esonụ, Njikọ nke nwoke na nwanyị, Atheism, Anwansi, Mgbu site na ịhụnanya ma ọ bụ ọnwụ, Udo, Ịghachite, Ike, Obi ike, Iso Ụzọ Kraịst / okwukwe ndị Kraịst, Ndụ, Sun / Sun-worship, Equality, Suffering, Death , Gothic / Goth omenala, Ime mmụọ, Na nwanyị, Nraranye, Constellation, Honor, Ascension, Cultural / family heritage and Memory nke onye a hụrụ n'anya. Ogbugbu egbugbu na-ewu ewu ma nwee ihe omuma, miri emi, omenala na akụkọ ihe mere eme nke a pụrụ ahazi.
Ndị nwoke na ndị inyom na-eji egbu egbu maka ọtụtụ ihe kpatara ya nakwa site na ngụkọta nke ihe pụtara na egbu egbu na-abịa. Ọtụtụ ndị mmadụ na-ahazi ya iji lee anya dị ịtụnanya na ị bụ onye ga-ekpebi ihe ịchọrọ ka cross gị pụtara. N'ikpeazụ, ọ bụ ihe ị na-eme cross gị na ọ ga-abụ maka gị. A pụrụ ịgbakwunye egbu egbu na ọtụtụ ihe na ọbụna ozi iji gbanwee ụzọ ọ dị ka. Dị ka ihe atụ, cross nke na-abịa n'ụdị dị iche iche na nha. Enweghị akụkụ nke ahụ nke na-adabaghị na ya. Gịnị ka egbu egbugbu pụtara? Ọtụtụ ndị nwere ihe dị iche maka ya. Ọ dị ezigbo mkpa ka ị mara ihe ị na-achọ n'ahụ gị.
Pịa ebe a iji chọpụta echiche nkwekorita ndị ọhụrụ na-egbuke egbuke maka ndị ikom na ndị inyom.
Ụbọchị igbu egbu egbu pụtara
A pụrụ iji ihe eji egbu egbu egbu ụbọchị iji kwuo banyere ọtụtụ ihe. Ọnwụ ahụ na-anọchite anya ụfọdụ nti vibes nke na-ekwu maka ndị hụrụ n'anya bụ ndị furu efu. E nwere ike iji egbugbu kwuo maka ncheta, ọnwụ, mkpụrụ obi, nloghachi, Mexico, ime mmụọ na nloghachi. Ụbọchị Ndị Nwụrụ Anwụ nwere ike iji mee ememe ndị enyi na ndị òtù ezinụlọ nke ga-agafe. Na omenala Mexico, ọ bụ egbu egbu nke ghọworo onye a ma ama.
Ụbọchị nke Ụdị Ebumnuche Ndị Nwụrụ Anwụ na-agbanwe site n'otu ebe gaa na nke ọzọ. E nwere ụbọchị dị iche iche nke ndị nwụrụ anwụ, ha nwekwara ihe ha pụtara. Echiche bụ na Ụbọchị Ndị Nwụrụ Anwụ pụtara ọnwụ site na ọnụ ọgụgụ buru ibu nke ndị mmadụ nwere ike ọ gaghị abụ eziokwu karịsịa ma ọ bụrụ na ejiri anya anya buru ibu. Ụbọchị nke Ndị Nwụrụ Anwụ nwere ike ịmịta n'ọtụtụ ụzọ na ha na-ejedebe na nkọwa dị oke mkpa ị ga-ahụ n'anya. Ụbọchị igbu egbu egbu nwere ike ịbụ ihe ncheta banyere onye nwụrụ anwụ nakwa na anyị niile kwesịrị ibi ndụ a n'ụzọ zuru ezu. Atụmatụ nke Ụbọchị Nwụrụ Anwụ nwekwara ihe ha pụtara dị ka ihe ị chọrọ ka ọ bụrụ.
Pịa ebe a maka ịlele ụbọchị ọhụrụ nke echiche mkpara ndị nwụrụ anwụ maka ndị ikom na ndị inyom.
Mkpụrụ obi ụra pụtara
Uche obi pụtara ịsọ oyi, agụụ na ịhụnanya. E nwere ihe ndị ọzọ dị n'obi na ihe ndị a pụtara site n'ụzọ e si egosipụta ha. Ụzọ nke obi na-adọta pụtara ọtụtụ ihe nye onye na-ekiri anyị. Ụdị, ụdị na ụdị igbu egbu bụ ihe na-eme ka ọ dị egwu. Ị nwere ike iji ya kọọ akụkọ banyere ịhụnanya. Ihe omume okpukpe na-ejikwa obi na-eme ihe n'ihi na ọ dị egwu. Site na ọnụ ọgụgụ nke obi dịnụ na ihe atụ ahụ ọ na-anọchite anya, onye ọ bụla nwere ike iji ya. Ị nwere ike iji obi nke dị nso n'ọdịbendị gị na-ekwusi okwu ike n'okwu gị.
Obi mkpịsị obi bụ ụfọdụ n'ime ihe kachasị mma ị ga-ahụ gburugburu. Ọ bụ obere na pụrụ iche. Ọ bụghị mmadụ niile ka ị na-ahụ ọnyà ndị a. Mgbe ị na-achọ nyocha igbu egbu iji chọọ nnwere onwe gị, egbu a bụ nanị otu ị ga-aga maka n'ihi ịma mma na mkpa. Ogbugbu obi abughi nani nani ma o di nma ile anya mgbe ana agbakwunye ya ozi. A na-agbakwụnye ube ya iji kọọ akụkọ.
Pịa ebe a maka ịlele echiche mkpịsị obi ọhụrụ nke obi ọhụrụ maka ndị ikom na ndị inyom.
egbu egbu osisi lotusndị na-egbuke egbukekoi ika tattooegbu egbu ebighi ebiakwara obimehndi imewedi na nwunyeaka mma akaụkwụ akaakara ntụpọzodiac akara akarannụnụegbugbu maka ụmụ agbọghọUche obin'olu oluarịlịka arịlịkaenyí egbu egbuna-egbu egbuegbu egbu egbuegbu egbu mmiriegbugbu egbugbuegwu egwungwusi pusiNtuba ntughariegbu egbu diamondegbu egbu hennandị mmụọ oziGeometric TattoosỤdị ekpomkpaechiche egbugbuaka akaAnkle Tattoosụmụnne mgbumma tattoosakpị akpịima ima mmaenyi kacha mma enyina-adọ aka mmaEgwu ugoazụ azụegbu egbuọdụm ọdụmaka akaudara okooko osisiegbu egbu maka ụmụ nwokeokpueze okpuezeegbu egbu okpuọnwa tattoosrip tattoosagbụrụ ebo